I-CET iyaqhubeka nokuhlinzeka ngosizo oludliwayo lokudla eRhode Island ngoxhaso oluvela ohlelweni lwesibonelelo se-11th Hour Racing - Centre for EcoTechnology
Isikhungo se-EcoTechnology (CET) siyaqhubeka nokuhlinzeka ngosizo lokudla oludliwe eRhode Island ngoxhaso oluvela ohlelweni lwesibonelelo sehora leshumi nanye lomjaho
Ngokusho koMkhandlu Wezokuvikelwa Kwemvelo (NRDC), ama-40% okudla e-USA aya kudliwa. Lokhu kudla okusaphazwa kunenani elilinganiselwa ku- $ 165 billion minyaka yonke futhi lapho kulahlwa endaweni yokulahla udoti, kunomthelela omkhulu kumagesi abamba ukushisa. Ukuphambukiswa kokulahlwa kukadoti wokudla eMbusweni, kungaba ukwehliswa kukadoti onjalo kwasekuqaleni, ngomnikelo wokondla abantu noma izilwane, noma ngokufaka umquba kanye nokugayeka kwe-anaerobic, kuyinto ephambili.
I-Rhode Island yisimo esisodwa nje esibeka phambili ukubuyiswa kokudla okudliwayo, futhi kumosheka ukuguqulwa kokudla. Isu le-RI Food, Thokozisa uRhody, kufaka phakathi izinhloso zokunciphisa ukungavikeleki kokudla kube ngaphansi kwama-10% nokuguqula ukudla okusaphazwa kokulahlwa phansi. Ngokwalo mbiko, cishe u-35% wayo yonke imfucuza elahlwa endaweni yokulahla udoti eRhode Island Resource Recovery Corporation (RIRRC) iyinto ephilayo.
Ngokusekelwa okusha kohlelo lwesibonelelo seMijaho yamaHora we-11, oluxhaswe yiSchmidt Family Foundation, i-CET izohlinzeka ngosizo lokudla oludlalwe nangaphezulu kumabhizinisi amaningi kulo lonke izwe ukuze ngempumelelo futhi kubize ngempumelelo ukusebenzisa amasu okubhekana nokudla kwabo okusaphisiwe. Lesi sibonelelo siyingxenye yeZilwandle Eziphilile Izilwandle Eziphilile Rhode Island, uhlelo olwenziwe umquba luhlose ukugqugquzela isimilo esihlala isikhathi eside semvelo esidingekayo ukuthuthukisa impilo yasolwandle. Abanye abahlanganyeli bafaka: Umquba Omnyama Womhlaba, Ukufinyelela Olwandle Oluhlanzekile, futhi Isitshalo Somquba. Umquba ungasetshenziswa njengokuchibiyela inhlabathi ngokulawulwa kokuguguleka kokufinyelela ogwini kanye nokwenza ngcono izinsizakalo zemvelo.
"Sijabule ngokuthola uxhaso oluvela ohlelweni lwesibonelelo samaHora we-11 ukusisiza ukubhekana nokuguquka kwesimo sezulu ngokugcina ukudla okusaphazwa ezindaweni zokulahla udoti," kusho uJohn Majercak, uMongameli we-CET. "Ukusebenzisana nabalingani bethu abaningi bezimboni kanye nohulumeni esifundeni sonke, siyazi ukuthi singawandisa umthelela wethu."
I-CET inolwazi olunzulu ngemakethe yesifunda futhi isiza amabhizinisi okudla asebenze kulo lonke Isigaba sabaphathi se-EPA ukukhomba izixazululo zokuvikela, zokululama, nezokuphambukisa, uzihlanganise komthungo emisebenzini ekhona. I-CET iqhuba umhlangano esizeni noma ojwayelekile ukuze ifunde kabanzi ngebhizinisi nezidingo zayo ezihlukile, bese inikela ngombiko owenziwe ngokwezifiso nezincomo, konke kungakhokhiswa ibhizinisi noma isikhungo.
Lo mzamo wakhela phezu komsebenzi we-CET eminyakeni eminingana edlule eRhode Island esekwe yi-Environmental Protection Agency (EPA), iRhode Island Department of Environmental Management (RIDEM), kanye noMnyango Wezolimo wase-United States (USDA).
I-CET ithuthukisa izinsizakusebenza ukusiza amabhizinisi aseRhode Island ukuthi asebenzise izixazululo ezihlala njalo zokudla okusaphazwa, nokukhuthaza abanye. Izindaba zingatholakala ku- Imikhakha Yemikhakha Yakwa-CET eRhode Islandivula ifayela le-PDF , okubandakanya izici ezifana ne-University of Rhode Island, i-Elisha Project, ne-Riverside Church. Ngokwengeziwe, kulandela ingqungquthela yango-2021 iRhode Island Food System Summit, i-CET ibambisene neYunivesithi yaseRhode Island ukubamba umhlangano webinar kugxilwe ecaleni lebhizinisi lokwehlisa, ukutakula, nokusebenzisa kabusha ukudla okulahlekile. I-webinar ibibandakanya amalungu endawo yokudlela yaseRhode Island nomphakathi othola ukubuyiswa kokudla kanye nesethulo ngamasu nezinsizakusebenza zokuvimbela ukudla kweCET. Amabhizinisi afana neNorth Restaurant neStoneacre Brasserie aqhakambisa izixazululo ezinjengokuxebula amanzi emzimbeni nokwenza ama-vinegars abilisiwe njengezindlela ezilula neziphumelelayo zokunciphisa ukusikwa nokulahlwa kokudla ekhishini.
“Kuyinto enhle ukuletha ubuchwepheshe bethu obungabizi izindleko ezindaweni zokudlela nasemabhizinisini okudla e-Aquidneck Island,” kusho uCoryanne Mansell, omele iStrategic Services eCET. UCoryanne usiza amabhizinisi ukusebenzisa izixazululo zokudla ezilahlekile ezakha umthelela. “Siyalibonga ithuba lokusiza osomabhizinisi ukuthi babone ukubaluleka nokubaluleka kokunciphisa ukudla okusaphazwa. Izixazululo zilungele umhlaba, abantu, futhi zenza umqondo wezomnotho futhi. ”
Ukunikezwa kwe-CET usizo lokudla olumoshwa mahhala nezinsizakusebenza eziningi kufayela lethu le- Izixazululo Zokudla Ezilahlekile iwebhusayithi. Lapha ungathola futhi izinsiza eziqondene nombuso zeRhode Islanders.
Xhumana ne-CET ukuze ufunde kabanzi ku- (888) 813-8552, noma ku-wastedfood@cetonline.org.
Juni 1st, i-2021 | 0 Amazwana